KingMarayu: အယင်ကျီ ပါဖိ
သဇင်ပန်းခိုင် တမြိုင်မြိုင် ရခိုင်ဘုးရားပေါင်း။
ရခိုင်စာသည် ငရို.စာ။ ကိုယ့်စာကို ကိုယ်သတ္တိဟိဟိ ရွီ...
အို.............. အဖ ။
လက်ခုပ်သီး တစ်လုံးတွက် သော့ တစ်ချောင်းတည်းမထားပါကေ့။
"လ ပ အရောင်ကို တန်ဖိုးထားလေးစား စရာမလို ၊ ပတင်းမေ အရောင်ကို တန်းဖိုးထားလေးစားကတ်။"
့ရခိုင်မြို့သားများတောင်တက်ရာတွင် ဘုတ်ဖိနပ်စီရန် လိုအပ်သော်လည်း ရခိုင်ကျွန်းသားများတောင်တက်ရာတွင် ဇာတစ်ခုလေ့ စီးစရာမလိုပါ။
လူတစ်တချို.က စိတ်မခိုင်ရေ လူတစ်ယောက်ကို အရှုး ဟု ရှုပ်ချ ကြပြီး တစ်ချို.ကမှု စိတ်ဝေဒနာရှင် ဟုဆိုကာ ကြင်နာယုယ ဖေးမတတ်ကြသည်။ မင်း ဘဇောင်လူ လဲ့?
ပလေတို။..........။ မယားယူလျှင် မမတိအကြောင်းကို သိထားသင့်ပါသလား။
အေးမောင်။.......။ မယားယူခြင်းသည် မယားယူခြင်းဖြစ်၏။မမတိအကြောင်းသိစရာမလို အိမ်ထောင်ရေး အကြောင်းကို ကျွမ်းကျင် ၊လိမ္မာပါးနပ်ဖို.လိုသည်။
ပလေတို။...........။ မမတစ်ယောက်မှာ လင်ကောင်းသားကောင်းရဖို့ ဇာပိုင်ရွီးချယ်သင့်ပါသလဲ။
အေးမောင်။.........။ လင်ကောင်းဖြစ်သောသူသည် သားကောင်းမဖြစ်နိုင်။ သားကောင်းသားလိမ္မာဖြစ်သောသူသည် လင်ကောင်းမဖြစ်နိုင်။ ယင်းကြောင့် မမတစ်ယောက်မှာ လင်ကောင်းသားကောင်းဆိုစွာလေ့ မရနိုင်။အမျိုးသားရေးဦးစားပီး ရွီးချယ်ပါ။
ပလေတို။...........။ ရခိုင်ဓလေ့မှာ လူသီ၍ အသုဘချသောအချိန်တွင် ရီအိုးခွက်ကို ခွဲကတ်စွာ ဇာကြောင့်လဲ။
အေးမောင်။..........။ အယူသီးသော ဓလေ့ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပလေတို။...........။ ဘုန်းကြီးများ ပျံလွန်တော်မူလျှင် ရုပ်ကလပ်အား ဒုံးများဖြင့်တိုက်သည်မှာ ဇာကြောင့်လဲ။
ပလေတို။...........။ ရခိုင်ဓလေ့တွင် ဆရာဝန်၊ အိန်ဂျိန်နီယာ အစဟိသော ပညာတတ် ယောက်ျားများအား ဝယ်၍ သမီးနှင့် ထိမ်းမြားသည်မှာ ဇာကြောင့်လဲ။
အေးမောင်။..........။ မိဘ များက သားသမီး နောက်ရေး ရင်အီး စီချင် သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အေးမောင်(ရင်အုံတော်ဓာတ်)အကျွန် အတန်း၌ ခရီယန် အသျှေ တစ်ယောက် နှင့် ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် အသျှေ တစ်ယောက်ဟိသည်။ အရက်နိ အကျွန်က ထိုအသျှေနှစ်ယောက်အား မိမိကြိုက်နှိုက်သက်ရာ ပန်ချီးကား တစ်ချပ်စီဆွဲခိုင်းလိုက်သည်။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဒဘာသာချေက ဘန်ကြီး ၃ ပါး ဆွမ်းခံကြွလာပုံ ကိုဆွဲပြီး၊ ခရီယန်ချေက ခရစ်ယန် ၀တ္ထူထဲက ဘုရင်သုံးပါး ( the three kings)ပုံဆွဲလာသည်။ အကျွန်က ထို သျှေ နှစ်ယောက်အား တစ်ယောက်ပုံ ကို တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး မိမိ၏ ထင်မြင်ချက်ကို စာရွက်ထက်၌ရွီပြီး အကျွန်အား ပြသရန်ပြောသည်။ထိုအခါ ဗုဒ္ဒဘာသာ အချေက ဘုန်းကြီးသုံးပါးဟု ထင်မြင်ချက်ပီး၍ ခရီယန်အချေက ဘုရင်ကြီးသုံးပါးဟုထင်မြင်ချက်ပီးသည်။ အကျွန်သည်ထိုအချေ နှစ်ယောက်စလုံးအား အမှတ်မှန် ပီးလိုက်သည်။
ကျမ္မာခြင်းသည် နီကောင်းခြင်းမဟုတ်ရေပိုင် ၊နီမကောင်းခြင်းလေ့ မဟုတ်။ နီမကောင်းခြင်းနှင့် နီကောင်းခြင်း အလယ်တတည့်၌ ဟိနိန်သောအရာကို ကျမ္မာခြင်းဟု ခေါ်ဆို ထိုက်ပါသည်။
ရခိုင်သား၊ ရခိုင်သမဖြစ် ယင့်သားနှင့် တခြားလူမျိုးနှင့် ပေါင်းစပ် ထိမ်းမြား လက်ထပ်သူများသည် ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားစကား ကို နားမထောင်သူများဖြစ်သည်။
ခေါင်းဆောင်ကောင်းရို.သည် မိမိ၏ ရာထူး ၊ဂုဏ်၊အဆင့်အတန်း ရို.ကို ထုတ်ဖော်မကြွားသင့်။
အမေရိကန် သမ္မတ လိန်ဂွမ်း သည်အချေ အခါက ဆင်းရဲလို. လမ်းဘေး ဓာတ်တိုင်အောက်၌ စာဖတ်ခ ရခြင်း အဖြစ်အပျက်သည် ကမ္ဘာသမိုင်းတွင်ထင်ရှား၏။ ယကေလေ့ ၂၁ ရာစု တိုင်အောင်ထိ သန်းပေါင်းများစွာသော ရခိုင်အချေတိ လမ်းဘေး ဓာတ်တိုင်ကို မပြောကဲ့ အိမ်မှာ ရနံဆီ ၀ယ်စရာတောင် ဖေ့သာ မဟိလို. ဆောင်းရာသီ၌ မိုးလင်း ၄ နာရီထ မီးဖော်ဘေးထိုင်ပြီး စာဖတ်ကတ်ရသော အဖြစ်အပျက်များသည် ကမ္ဘာသမိုင်းမှ ဟားတိုက်ခံ ထားရသည်မှာ အံ့အော စရာကောင်း၏။
WhErE eVeR wE aRe, ThE oNlY pLaCe We CaLl HoMe Is ArAkaN!
Warmly Welcome to Arakan (ဘုရားသာသနာမြီ မောင်ရို.ရခိုင့်ဌာနီ)
ရခိုင်မော်ဒန်ရော့(ခ်) (Arakan Modern Rock)
အနာ ဒဏ်ရာ ဟောင်းတိ
ဆားမရ၊ ရီမရ ခံဖိ ..............။
လိုအပ်နိန်ရေ "ငါ" ဆိုရေ
မီးနန်. ထိုးနိန်ကတ်သိမ့်ယင့် .........။
လူနာ နန်. ဆီးသမ
မလောက်င ရေ ငရို.ဘ၀ ...........။
ဆားငန် ရီ နန်.
ရီတိုက် စွာကို ခံခါ ခံ
ကြာလာကေ ဗျ ကျန်ယာ ..............။
တောရှင်းဖို. လာရေပိုင် ပုံစံနန်.
စေတီ ဌာပနာ ဖောက်ယူလားရေ
ဒေ လူဆိုး၊ သူခိုး တိ
ဇာခါ ကျီဖို.လေ့ ချင့် ....................။
Posted by KingMarayu at 23:46
လာလလ်ရေလူ အပေါင်းရို့ ကျမ္မာကတ်ပါဇီ။
ရခိုင်ဘုရင် မင်းဘာကြီး နှင့် မိဖုရား
MTV - VCD ထွက်ပါဗျာလ်။
Find more music like this on Arakanese Meeting Point
ဒေနိုင်ငံက လာလည်စွာ ဘာလာ